“Dago festival”: tosika ho an’ny kanto sy ny mpanakanto | NewsMada
“Dago festival”: tosika ho an’ny kanto sy ny mpanakanto
Tonga amin’ny andiany faharoa ny “Dago festival”, hotanterahina, ny 20 hatramin’ny 22 septambra etsy amin’ny Alliance française (AFT) Andavamamba. Tanjona ny hampandroso ny tontolon’ny zavakanto sy ny mpanakanto ary ireo mpisehatra amin’izany.
Tsy miova fa “Mandray ny andraikitro aho” ny lohahevitra, amin’ity andiany faharoa ity.
Ho fanatrarana io tanjona io, miara-dalana amin’ny “Dago festival” ny “salon” ho an’ny indostria mikirakira ny kolontsaina sy ny asa famoronana eto Madagasikara. Mikendry ny hamondrona ireo sehatr’asa mifamatotra amin’ny kolontsaina sy ny zavakanto ity hetsika iray manokana ity.
Hotanterahina eny amin’ny oniversiten’Antananarivo ny fanokafana ny « Dago festival », ny alarobia 19 septambra, amin’ny alalan’ny seho andraisan’ny mpanakanto maromaro anjara, toa an-dry Mamina sy ny El Diabo avy atsy La Réunion. Eny amin’ny AFT kosa ny fotoana, ny 20 hatramin’ny 22 septambra.
Maro karazana ny zavakanto homena sehatra, mandritra ny hateloana : ny mozika amin’ny gadona samihafa, ny dihy, ny slam, ny teatra, sns. Ankoatra ny seho, hisy ny famelabelaran-kevitra mikasika ny « Fivezivezen’ny mpanakanto aty amin’ny ranomasimbe Indianina ». Eo koa ny fihaonan’ny mpanakanto amin’ny mpandraharaha.
Hanamarika ny « Dago festival », amin’ity taona ity, koa ny fanatanterahana ny « Unity concert » andiany fahadimy, ny asabotsy 22 septambra, ao amin’ny AFT hatrany. Raha tsiahivina, hetsika iray hanehoana fiaraha-mientana sy ho fiaraha-manentana amin’ny fiarovana ny tontolo iainana izy ity.
Maromaro ny mpanakanto handray anjara amin’izany fanentanana izany, toa an-dry Toph Rebel, Mashmanjaka, Kristel, sns. Araka ny fantatra, hoentina hividianana zana-kazo fihinamboa ny antsasaky ny vola azo amin’ny fivarotana “t-shirt”, mandritra ity “Unity concert” ity.